နွေဆူးလင်္ကာ: ကျွန်တော်နှင့် အရူးဒဿန
ဟဟဟား ဂွတ်တယ် ဂွတ်တယ်
ဖတ်ပြီး ပြုံးမိ၏။ ကောင်းလိုက်တဲ့အတွေး
cool, man! it did hit where you aimed!
ရေးသားချက်က တကယ်ကိုထိမိပါတယ် ဖတ်လို့ကောင်းတယ်
အတွေးနဲ့အေ၇းလေးက ကောင်းတယ်၊ အားပေးနေတယ်နော်။
နွေဆူးတို့မြို့က ပျင်းမနား နယ်က ကြပ်ပြေးဒေသလားဟင်???
မပြုံးပဲ ဝါးလုံးကွဲ လောက်ပါပေတယ်။
အရူးဆိုတာမျိုးက သနားစရာလည်းကောင်း .. ရယ်စရာလည်းကောင်း .. ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော် .. :D
ဒီ post လေးကြိုက်လို့ Mail letter ထဲမှာ ထည့်ပို့ဖို့ ကူးသွားပါတယ်။
ဒီအရူးတေနပ်ကြီး အခု ဘယ် ရန်သူတွေကို ပစ်ဖို့ အကောက်ကြံနေလဲ မသိဘူးနော်
ပြည်သူအပေါင်း သတိကောင်းကောင်းသာ ထားနေကြပါတော့..